Bilood 11 3 todobaad ka hor - Bilood 11 3 todobaad ka hor #1124 by Optimizator
Hello! Dhibaato ayaan leeyahay laba diyaaradood. Kadib caadi WAXYAALO ku rakibidda FSX SP2, dhamaan moodeelada muraayadda diyaaradeed ma aha WAA WAX BARNAAN? Til waa caadi.
Tijaabiyuhu wuxuu sheegayaa in sanqaduna aysan jirin!
Last edit: Bilo 11 3 usbuucyo by by Optimizator.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Jandirk
Bilood 11 2 todobaad ka hor #1127 by Camo6152
Waxaan soo dejiyey baakad isku mid ah.
Markaan tago si aan u doorto mid ka mid ah ATRs ee "bedelidda diyaaradaha" waxaan arki karaa halkaa, laakiin markii aan ku dhufto "Fly Now" button FSX Shilalka Steam.
Caawimaad kasta waa loo mahadcelin doonaa
Bilood 11 2 todobaad ka hor #1128 by Camo6152
By habka aan soo dejiyey xirmo ee habka lagu taliyey oo loo doortay dariiqa Steam.
10 bilood 1 toddobaad ka hor #1175 by flaps1262
Ilaalinta Tareenka iyo Hp wakhti kasta waa la joogaa.
10 bilood 1 toddobaad ka hor #1176 by rikoooo
Haa, tani waa arrin la garanayo oo kaliya oo ku jirta 2D Panel, Anigu ma helin qalliin hadda, qof kastana waa la soo dhaweynayaa si uu iigu caawiyo inaan xal u helo.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: flaps1262
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.850